Bubbles: nyowani multitasking inowanikwa mu Android Q Beta 2 | Linux Vakapindwa muropa
Mineti yekupedzisira nezuro, Google yakakanda Android QBeta 2. Iyo beta nyowani yeshanduro iyo, kana pasina chinoitika, inoshandisa iyo nhamba gumi inouya nenhau pakati pedu idzo tine zvakajairika bug fixes, kumwe kugadziriswa kuchazonyanya kuwanda nekuti iwo ari software muchikamu chekuyedza. Pamusoro pezvo, SDK yakagadziridzwa yevagadziri yakaverengerwa. Kune rimwe divi, ese akachengetedzeka ematehwe eApril 10 akaverengerwa.
Zvichida chinonakidza kwazvo zuro wekutanga chiri mu nyowani multitasking modhi inonzi Bubbles (matema). "Bubbles" inobvumidza vashandisi kuisa pamberi peimwe ruzivo uye kutarisa mabasa ari kumhanya. Nzvimbo yekuchengetera kuiswa kweapps nyowani zvakare yakagoneswa nekusarudzika kuvabvumidza kumhanya mubhokisi rejecha rakavanzika pasina mvumo, emulator nyowani ine rutsigiro rwemidziyo inopetwa, sarudzo dzekugovana dzakagadziriswa, uye rutsigiro rwekuwedzera mamaikorofoni.
Android Q Beta 2 ikozvino yave kuwanikwa
Android Q ichave inowanikwa chirimo chino uye pakati pekuvandudzwa kunozobatanidzwa, izvo zvisiri zvitsva kune beta 2, tichava nenhamba yakanaka yekuvandudzwa kwekuchengetedza. Tsigiro yeVulkan 1.1 mifananidzo inozosanganisirwa kusimudzira ruzivo rwemitambo, rutsigiro rwemidziyo inopetwa, midhiya midhiya midhiya akawanda kana sarudzo nyowani mukamera. Uye ndeyekuti mafoni kamera ndeimwe yemasimba mune chero inotungamira smartphone inokoshesa munyu wayo.
Chero ani anoda kuyedza izvi uye nezveramangwana Android Q betas anogona kuzviita nekujoinha iyo Android Beta chirongwa kubva Iyi link. Pakutanga inongowanikwa chete nemafoni ePixel uye chero munhu anochizama anofanirwa kuziva kuti chinogona kumhanyira muzvikanganiso zvakawanda. Kuisirwa kwayo hakukurudzirwe kunze kwekunge iwe uri mugadziri kana kuti ichishandiswa mumidziyo yatisingavimbe nayo. Kana iwe ukazviedza, usazeze kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Bubbles: nyowani multitasking inowanikwa mu Android Q Beta 2